Raha ny fijeriko azy: inona no tena anjara birikin'ny DesdeLinux amin'ny fiarahamonina manerantany? | Avy amin'ny Linux
Raha ny fijeriko azy: inona no tena anjara birikin'ny DesdeLinux amin'ny fiarahamonina manerantany?
Vao omaly aho dia niresaka tamina olo-malaza somary malaza ho an'ireo izay efa namaky anay vetivety: herim-po
Mitranga izany fa eo anelanelan'ny zavatra iray sy zavatra iray hafa dia nanomboka nanazava taminy aho tamin'ny fomba fijeriko, momba izay heveriko fa mandray anjara amin'ny tambajotra, amin'ny vondrom-piarahamonina manerantany ny DesdeLinux.
3 Afaka miteny ho anao izahay:
4 Farany ...
Iray amin'ireo tranokala vitsivitsy izahay izay mamoaka lahatsoratra mikendry ny vaoavao, ny vaovao ary ny te hahafanta-javatra, mamoaka ho an'ny mpampiasa antonony koa izahay, ary koa ho an'ireo mpampiasa efa mandroso, manana lahatsoratra maro koa izahay ho an'ireo mpitantana tambajotra sy mpandahatra programa. Nefa tsy izany ihany, izy ireo koa dia afaka nahafantatra fa lahatsoratra hevitra maro no navoaka, izay manasa fandinihana, ary koa lahatsoratra izay mampitaha fampiharana, distros, sns.
Ka azo lazaina fa: DesdeLinux dia manaparitaka saika ho an'ny mpihaino rehetra, na olon-tsotra, mpampiasa antonony, mandroso, mpitantana tambajotra na mpandahatra programa, na lahatsoratra teknika, fampianarana, boky fampianarana na tsia.
Fanampin'izay, manana ny vaovaontsika kely foana izahay. Izaho manokana dia mieritreritra fa be loatra ireo tranonkala mamoaka vaovao sy vaovao amin'ny tamba-jotra, fa… ndao hiresaka amin'ny anarana 🙂
Raha te hamaky vaovao ianao, Tena Linux dia tranokala izay mamoaka ny vaovao farany foana, mazava ho azy fa tsy maintsy manapa-kevitra foana ny olona ary tsy mizaha tavan'olona, ​​amin'izany fomba izany ny tsiron'ny tonian-dahatsoratra (izay ho eo foana amin'ny lahatsoratra, ary tsy ao amin'ny MuyLinux ihany fa amin'ny tranonkala rehetra) tsy ho afaka hitaona antsika.
Raha te hahita fifandanjana eo anelanelan'ny fampianarana ianao na ny firesahana momba ny fampiharana sy ny vaovao, Andao hampiasa Linux tsy isalasalana fa safidy tsara io. Raha ny marina dia ireo lahatsoratra 3 momba ny Bash izay vao noforonin'izy ireo, ho elav tia azy ireo 🙂
Ary tranonkala roa fotsiny no noresahiko, tsy isalasalana fa maro hafa ny mamoaka vaovao ... ary, amin'ny ankapobeny, dia vaovao mitovy hatrany amin'ny ankamaroan'ny tranonkala ... vaovao mety mivoaka avy ANDRIAKAKY Ô! Ubuntu!, WebUpd8, Bilaogin'i Mark Shuttleworth, amin'ny toerana anglisy, sns. Ka ... tsy dia misy dikany firy amiko ny maha-tranonkala hafa izay mametraka vaovao fotsiny, aleoko aloha omentsika lesona, boky torolalana, eny ... tsara tranonkala bebe kokoa no ilaina hamoahana tsy dia vaovao mitovy ihany, ary eny fampianarana mahaliana, fitaovana.
Nanome hevitra ihany koa aho herim-po, fa tsy ilay tranonkala misy vondrom-piarahamonina kely toa ny 10 volana lasa intsony isika, fa soa ihany fa efa manana mpampiasa maro hafa mamaky anay izahay, mpampiasa izay manana olana ihany koa hamela fanehoan-kevitra hanomezana anjara biriky, hampiharihary ny fomba fijerin'izy ireo sy ny zavatra niainany , handraisana anjara sy hanankarena ny tranonkala amin'ny atiny tsara kokoa, miaraka amin'ny adihevitra tena mahomby sy mahaliana.
Manana a Foro ahafahan'ny tsirairay mamariparitra ny olany, manazava ny lesoka asehon'ny fampiharana X azy ireo ... forum iray izay hanampian'ny tsirairay, amin'ny fomba tsy liana tanteraka, izay hananantsika rehetra mahalala zavatra afaka manampy ny mpampiasa manana an'io olana io anjara birikinay hamahana izany olana izany.
Tsy lazaina intsony ny al IRC, fa na dia tsy io aza no zavatra mavitrika indrindra eto an-tany, dia misy fotoana mahafinaritra foana 🙂
Ankoatr'izay, tsy hoe mpisava lalana isika na kely kokoa amin'izany no holazaiko, fa imbetsaka izany dia manampy antsika hamaha ny toe-javatra X - » Twitter
En kaonty Twitter anay (@fromlinux) Mpampiasa rehetra manontany anay zavatra, raha fantatray ny valiny hamaha ny olanao, dia faly izahay manampy anao, manome anao ny rohy izay hamaha ny olana izahay ... ary, raha tsy fantatray izany, izahay dia hametraka ny fanontanianao amin'ny mpanaraka an'arivony maherin'ny arivo ananantsika, amin'izay dia olona maherin'ny 1300 no hamaky ny fanontanianao ... ary ry namako, manome toky anao aho fa hisy hamaly sy hanampy amin'ny famahana ny olana 😉
Tsy isalasalana fa io no teboka mahery ankehitriny, ianao ... ilay vondrom-piarahamonina lehibe sy mahafinaritra natsangana tao amin'ity habakabaka kely ity izay mbola DesdeLinux 🙂
Afaka miteny ho anao izahay:
Iray amin'ireo lafiny izay herim-po ny tsikera, ny fahaizan'ny tsirairay manoratra amin'ny FromLinux, amin'ny ampahany azoko azy, fa amin'ny ampahany kosa mihevitra aho fa diso izy.
Mba hanazavana izany dia tsy maintsy fantarintsika aloha: Inona ny DesdeLinux?
Avy amin'ny Linux (aka: <° Linux) mikendry ny ho tranonkala iray ahafahana mizara fahalalana, vaovao, fampahalalana na inona na inona karazana mety hahaliana ny fiaraha-monina manerantany. Ambonin'izany rehetra izany dia sehatra hizarana traikefa mifandraika amin'ity tontolo mahafinaritra an'ny Free Software na OpenSource ity.
Rehefa avy nanazava izany dia inona no ilana ny toerana iray hizarana traikefa, raha toa ka vitsivitsy no mizara ny zavatra niainany na ny fahalalany? Eo am-piandohan'ny bilaogy isika (izaho sy elav) fa izahay no nanangana azy, nanolotra ny fahafaha-mpanoratra izahay ho an'ireo mpampiasa izay noheverinay fa manana ny toetra ilaina amin'izany, na dia tsy voafetra ihany aza ny fidiranay amin'ny fanoratana lahatsoratra ... izay mpampiasa nisoratra anarana dia afaka mizara ny fahalalany, fa izahay kosa dia mahafantatra fa ity mety ity dia zavatra kely tsy dia fahita amin'ny Internet, izany no antony nanoloranay mpampiasa sasany izany fahafaha-miasa izany hiara-hiasa amin'ilay tranonkala sy ny fiarahamonina. Izany no ananantsika lahatsoratra tsara nosoratan'i Tina Toledo, ilay namantsika Icarus Perseus, Nano iza koa no mpandrindra eto, Manuel fa na dia manome tsindraindray lahatsoratra tsara aza isika, ary lava be sns.
Saingy, mandritra io fotoana rehetra io dia be dia be ireo mpampiasa nanoratra teto, nanome fampianarana, tantara, sns., Dia nisoratra anarana tao amin'ilay tranonkala fotsiny izy ireo (nick, mailaka, teny miafina ary teny miafin'ny kaontinao ... HAHAHA !!! TPT!!) ary tsy misy hafa.
Firy amin'ireto lahatsoratra ireto no ho very, tsy hisy ve izany raha tsy nandray ny fanapahan-kevitra hisokatra amin'ny olon-drehetra hatramin'ny voalohany isika?
Tsy holazaiko ny valin'ny resaka fa tsy misy ifandraisany izany. Holazaiko fotsiny fa tsy ampy ny fanoherana nataoko LOL!.
Manantena izahay fa ho tianao araka ny hitanao, mbola betsaka ny zavatra tokony hatsarantsika satria iray taona sy tapany sisa hiainantsika ... saingy, noho io antony io, dia mbola betsaka ny zavatra tokony hambolena 🙂
Ny fanakianana, ny fitarainana, ny fisalasalana, ny hevitra na ny tolo-kevitra rehetra manorina hatrany… dia raisina an-tanan-droa, ary mampanantena aho fa horaisina an-tsaina hatrany ny rehetra.
Raha izany, raha te hanome vato ho an'ity tranonkala ity ianao amin'ny fifaninanana Hazo 2012, tena ho feno fankasitrahana izahay 😀
Mifidiana an'ity tranonkala ity amin'ny sokajy bilaogy teknolojia y bilaogy fiarovana ny solosaina, tena hanampy be dia be ianao 🙂
Misaotra betsaka fa efa namaky hatreto, misaotra amin'ny foko lalina. Tsy dia be loatra amin'ny lahatsoratra toa an'ity aho, tiako kokoa ny manoratra lahatsoratra ara-teknika, boky torolàlana, fampianarana na torohevitra ... saingy nahatsapa aho fa tokony hanoratra an'ity 🙂
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Raha ny fijeriko azy: inona no tena anjara birikin'ny DesdeLinux amin'ny fiarahamonina manerantany?
72 hevitra, avelao ny anao
Raha ny fahitako azy dia mandray anjara betsaka amin'ny fiaraha-monina ny DesdeLinux, ary miaiky aho fa ianao, noho ny ezaka sy ny asanao, dia namaly ny fisalasalana maro ananako momba ny Linux sy ny OpenSource.
Manantena aho fa hitombo izy ireo ary mazava ho azy, hanao ny kely vitako aho mba hahatonga ity tranonkala ity ho tsara indrindra amin'ny rehetra.
Misaotra anao sy izay rehetra mamaky anay ary mijanona eto, ianao koa dia avy amin'ny Linux 🙂
Ary ny fieritreretana fa tetik'asa olona adala roa te hanatevin-daharana ny bilaoginy manokana izany rehetra izany hahaha .. Misaotra ny Community manontolo izay manodidina antsika. 😉
Toy izany koa! HAHA.
Raha ny marina, tao amin'ny lahatsoratry ny tsingerintaona faha-1 an'ny bilaogy dia nitantara ny andro namoronana ahy aho 😀
frk7z dia hoy izy:
Mbola tadidiko fa toy ny omaly ny lahatsoratr'i elav momba ny LMDE xD, ireo ampahany 4 amin'ny fikirakirany izay hitako tao amin'ny bilaoginao elavdeveloper xD ... maninona ny fiovan'ny zava-misy eh, na dia tsy mandray anjara na maneho hevitra firy aza any aho dia compadres foana. Asa tena tsara! ary misaotra betsaka amin'ny zavatra rehetra zarainao aminay. 🙂
Mamaly an'i frk7z
Tsy tadidiko akory fa Hahahaha, tsia, tsy marina, raha tadidiko, satria noho ireo lahatsoratra ireo dia afaka miaraka aminareo isika izao ... Misaotra
HAHAHAHA eny, LMDE be dia be taloha ... iza no hilaza fa ho very maina ity distro ity? … Re: Izaho, hoy aho!
Misaotra ny hevitra namana
Hatramin'ny nahitako an'ity toerana ity noho i elav, satria tamin'izany fotoana izany dia narahiko ny bilaoginy fony aho mpampiasa Debian, dia nanana fahatsapana foana aho fa te hiavaka amin'ny bilaogy ny bilaogy na amin'ny fomba fanaovana ny lahatsoratra ary izany dia nanao ahoana ...
Amin'ny lafiny iray dia miarahaba anao amin'ny foko rehetra aho, ary manantena aho fa handray anjara amin'ny fiaraha-monina amin'ny fizarana lahatsoratra ihany koa any aoriana.
Tohizo ny asa tsara satria ny desdelinux dia bilaogy namboarin'ny mpampiasa ho an'ny mpampiasa ary ny tsara indrindra ahafahantsika rehetra mandray anjara.
Famihinana avy any Kolombia.
Misaotra noho ny zavatra rehetra, mampahery tokoa ny mahafantatra fa misy ireo mpampiasa efa nahafantatra ahy taloha be. Ny fahafaham-po lehibe indrindra amin'izany dia ny fahafantarana fa ny zavatra nosoratako dia nahasoa tamin'ny mpampiasa maro. Misaotra anao nijanona.
Elav malalako sy KZKG ^ Gaara.
Na dia te hanoratra aza aho dia tsy dia tiako loatra ny manao izany ivelan'ny toerana sasany, fa hatramin'ny nahitako an'ity tranonkala ity dia nanapa-kevitra ny handrava an'io paradigma manokana io aho ary handray anjara amin'ireo diako ary hizara azy ireo aminareo rehetra. Ny tantaran'ny teknolojia fampahalalana sy ny hetsika tontolo iainana misokatra dia manankarena sy isan-karazany.
Misaotra anao sy ny vondrom-piarahamonina iray manontolo amin'ny fanekenao ahy amin'ity habaka ity ary namela ahy ho anisan'ity vondrom-piarahamonina manan-karena sy isan-karazany ity.
Misaotra anao naniry ny ho anisan'ity habaka ity. Ankasitrahanay ny fanatrehanao sy ireo mpampiasa rehetra mandalo ka mamela anay ny hevitr'izy ireo, ny lahatsoratra, ny heviny ... na izany aza ... Misaotra
Ary ho anay dia fahafinaretana ny manana fizarana kely misy ny tantara eto ny namako haha, tsara foana ny mahafantatra hoe avy aiza ireo zavatra ampiasaintsika, tsikeraina na arovantsika ankehitriny 😉
Misaotra anao tamin'ny anjara birikinao 🙂
Salama, sambany aho manome hevitra eto, tsy haiko ny antony tsy anaovako azy teo aloha. Efa 6 volana izay no nanombohako nanomboka ny Linux, ary ny marina dia mahazo aina be aho, fa anisan'ny lesoka (ankoatry ny fahalianako manokana) dia anao, nivadika ho Linux aho. Ary ny zava-misy dia eto no iray amin'ny voalohany, raha tsy ny toerana voalohany nandehanako namantatra hoe "inona no mitranga amin'ny GNU / Linux." Androany aho linuxero ho amin'ny fahafatesana, tiako izany, mahazo aina aho, manova ny fomba fahitako zavatra na izany aza. Mazava ho azy fa isan'andro aho dia mamaky amin'ny Linux, ary na dia mbola betsaka aza ny zavatra tsy mbola fantatro momba an'ity tontolo Linux ity, misaotra anao aho mianatra. Miarahaba anao avy any Uruguay ary misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anjara rehetra nataonao
fa tsy mampiasa mac eh, ato amin'ny SolusOS aho, saingy hita fa miaraka amin'ny browser midori aho dia toa manana mac hehej Miarahaba anao indray
TheSandman86 dia hoy izy:
Miombon-kevitra amin'izay nolazain'i Gaara aho, ary mieritreritra aho fa ny famelan'izy ireo sy ny famporisihany ny mpamaky hamorona atiny dia iray amin'ireo lakilen'ny fahazoana ny antony mahatonga ny DesdeLinux ho iray amin'ireo tranonkala malaza Linux sy Free Software (raha tsy ny be mpitia indrindra) amin'ny Espaniôla, ary miaraka amin'izay koa vondrom-piarahamonina mahafinaritra izay reharehako fa anisan'ny. Arahaba avy any Arzantina !!
Mamaly an'i TheSandman86
Raha ny tena izy dia tsy hoe mitady ny ho be mpitia indrindra isika na tsia, fa te-hanatratra mpihaino marobe araka izay tratra, satria mino izahay fa mety hampiasana na mahaliana ny maro ny lahatsoratray 🙂
Miarahaba compa! 😀
Tsy handresy lahatra azy ianao ………… ..
Anananao ny vatoko!
Misaotra ny ekipa rehetra.
Misaotra anao!! misaotra tokoa tamin'ny latsa-bato * - *
Ho ahy manokana dia afaka milaza aho fa nanaraka azy ireo nandritra ny volana maromaro izao, ary na dia tsy mamela hevitra marobe ao amin'ilay lahatsoratra aza aho dia namaky azy ireo tsirairay avy. Tonga tamin'ny fahatongavany ho iray amin'ireo pejy lehibe tsidihiko isan'andro izy ireo, hatramin'ny hanokafako ny browser ary iray amin'ireo tabilao izay miseho voalohany 😀
Tiako ny asa ataon'izy ireo, tsy noho ny habetsaky ny vaovao avoakany ihany, fa noho ny fiarahamonina manodidina azy ireo koa, izay ahatsapako fa tena mahazo aina aho.
Manantena aho fa manatsara hatrany azy ireo isan'andro.
Miarahaba anao zalahy 😀
Ny tsara dia ny famakianao vaovao tsara, zavatra mahaliana, sns.
Ary tsy ny vaovao ratsy avy amin'ny tontolo tena izy ...
Eny, misy mpampiasa maromaro (vitsivitsy) fantatro fa mamaky anay fa tsy manome hevitra, tsy maninona na izany aza dia ampahany amin'ny fiarahamonina izy ireo, manoratra ho an'ny rehetra izahay ary manome sakafo ny olon-drehetra 😀
Ny iray amin'ireo zavatra (miantso azy hoe nofy raha tianao) izay nananako hatrany am-piandohan'ny tranokala dia andro iray hahatratrarana vondrom-piarahamonina iray, izay ahitan'ny olona rehetra, na inona na inona Ubuntu na Gentoo, dia mahazo aina daholo ny olona, ​​aiza ny tsirairay mahatsapa ho ampahany mitovy (izy ireo!), ampahany amin'ny GNU / Linux 🙂
iray amin'ireo toerana tsara indrindra hiresahana amin'ny tontolon'ny GNU / linux, ary hihatsara hatrany! xD
Misaotra anao!! 😀
Tena tsara KZKG ^ Gaara, ity karazana lahatsoratra ity dia tena zava-dehibe ho an'ny mpanaraka bilaogy, mazava tsara fa ireo mpankafy rindrambaiko maimaimpoana dia manana io toerana malalaka io hiara-maniry. Tohizo ny fitoriana amin'ny "Mianara mba ho tsara kokoa amin'ny Linux", manome toky anao aho fa manana mpankafy mahatoky maro izy io. Mihobia!
Ie, indraindray dia ilaina ny mahatadidy fa misokatra amin'ny fiaraha-miasa isika, fa anjaran'ny tsirairay io fa tsy vitsy fotsiny 😉
Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra, tena ataoko izany.
Faly be koa aho fa nomen'izy ireo fotoana ahafahana mamoaka ny sasany amin'ireo lahatsoratro amin'ity tranokala ity, na dia teo am-piandohana aza aho dia navitrika tamin'ny fantsom-pifandraisana IRC rehefa elaela no hadinoko, tsy misy olona mifandray na ilay iray mihaino fotsiny, ny IRC indray andro dia nitantara tamiko ny antony mahatonga ny famantarana FromLinux.
Te-hanome sosokevitra aho mba hanao tetik'asa eo afovoantsika ka ny <° FromLinux dia zavatra mihoatra ny tranonkala iray, toy ny webupd8 izay manana tetikasan'ny ppa sns., Heveriko fa mety hanampy antsika mpiara-monina hiasa amin'ny maha ekipa azy ireo ary raha zavatra manandanja tokoa izy io dia mety hipoitra ao amin'ny fandaharam-pianarantsika.
Lahatsoratra <° marobe no nanompo ahy ary antenaiko fa hitohy mandritra ny taona maro ary tsy hankaleo ireo izay mamoaka, satria amin'ity bilaogy isan'andro ity dia misy zava-baovao vakiana.
Ny tsiro no namantsika rehetra 🙂
Ny mpampiasa rehetra dia manana zavatra mahaliana foana ny mandray anjara, mila mazoto fotsiny izy ireo ary manao izany 😀
Momba ny an'ny PPA sy ny hafa, farafaharatsiny tsy mpandahatra fandaharana aho hahahaha, tena tiako ilay hevitra, saingy tsapako fa tsy afaka mandray anjara firy amin'ny programa LOL aho!
Hitako tao amin'ny DesdeLinux, toerana iray hizarana vaovao, toerana iray izay, tamim-panajana, no nahazoako loharanom-baovao sarobidy momba ny distro-ko sy ny tontolon'ny Linux. Na izany na tsy izany, tsy ela io dia nanjary bilaogy tsara indrindra novakiako teo amin'ny fiainako, ary ny safidiko voalohany hanoro hevitra sy hamaky isan'andro. Ny fialamboliko dia tonga amin'ny teboka iray ka rehefa hitako mandalo ny andro tsy misy famoahana vaovao dia tsy hitako izay hatao. tpt
Ankoatr'izay dia tsapako fa lasa fianakaviana lehibe ity habaka ity !!!
ENY !!! 😀
Misy roa amintsika izay mahatsapa zavatra mitovy, mahatsiaro ho ratsy aho amin'ny andro tsy ahatongavako eto haha
mihoatra ny fampianarana dia miditra amin'ny lahatsoratra momba ny hevitra aho, ary mitam-piadiana ny lelafo !!!
HAHAHAHAHA mpifosa ianao hahaha
Feno fankasitrahana ihany koa aho, ary naneho hevitra tamin'ny fotoana hafa, fa mbola tsy miseho eto ny troll.
seachello dia hoy izy:
Tiako manokana ny maha-samy hafa ny lahatsoratra. Tiako tokoa io. Ary heveriko fa ny iray amin'ireo "fiderana" tsara indrindra azoko omena ny bilaogy dia ny im-betsaka ny fanehoan-kevitra mahaliana tahaka ilay lahatsoratra ihany (mazava ho azy fa ambonin'izany rehetra izany, fa tsy izany ihany, ao amin'ireo lahatsoratra misy heviny). Iray amin'ireo taratry ny fiarahamonina tsara izany.
Fiarahabana avy any Barcelona (fantatrao fa namaky azy ireo tamin'ny kontinanta roa farafaharatsiny !!)
Eny haha, sendra mpampiasa tokana no nanoratra ity lahatsoratra ity, saingy avy eo dia maro ny mpampiasa maneho hevitra.
Izaho manokana dia nianatra torohevitra vaovao vitsivitsy noho ny fanehoan-kevitra navelan'ny mpampiasa tamin'ny lahatsoratro, izany no zavatra lehibe momba ny fiarahamonina, fahalalana iraisana haha.
Fantatro ilay lehilahy sola, ny tiako holazaina dia ... elav, taloha elabe, ary Gaara avy tamin'i Pardus Life sy ny bilaoginy KDEero. Inona no holazaiko fa mbola tsy nolazain'izy ireo. Io Deb Linux dia iray amin'ireo lehibe indrindra, azafady, tiako ny nilaza hatramin'ny Linux, ny anarana dia mitovy.
HAHAHA dia efa naka tahaka ny voalohany tamin'ny anaranao ve izahay, dia hitanao izao? … JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA !!!!!
Tonga tany amin'ilay bilaogy notaritarin'i KZKG ^ Gaara sy Elav aho fa nifankahita tamina tranokala kiobanina (GUTL) izay mifampiresaka amin'ny SWL koa dia nihaona tao amin'ny seha-panohanan'izy ireo aho ary nanasa ahy hiditra eto izy ireo, ka nandalo ny fotoana ary tsy tonga saina saika isan'andro mandehandeha ao amin'ny IRC aho dia mandinika ireo lahatsoratra ary indraindray aza dia namela ny ahy manokana
PS: Raha misy tsy mankasitraka ny lahatsoratro, tsara… fantatrao hoe iza no nitondra ahy, omeo tsiny izy.
Salama daholo. Kage am-panajana tanteraka, ny tantaranao sy ny herimpo toa tantaram-pitiavana, hehehe sangisangy, araka ny nanoratako teo aloha, betsaka ny tokony hisaorana anao. ary heveriko fa ny fahasahian'ny namana dia mitaky zavatra tafahoatra loatra. Eny, marina fa maro eto no tsy mahalala na inona na inona, fa ireo mahalala eto dia afaka manoratra ary afaka mianatra isika ary tsy hitako izay maharatsy an'izany (na dia manome toky anao aza aho fa mety tsy hitovy ny fomba fahitantsika ny fiainana) .
Na izany na tsy izany, misaotra ny asanao sy ny fotoananao ry zalahy
HAHAHAHAHAHA inona no hataoko, nankasitrahako ny troll HAHA.
Misaotra anao namaky anay 😉
Eny, tena feno fankasitrahana anao aho… hatramin'ny nahalalako an'ity vondrom-piarahamonina ity, tsy nisy andro iray akory raha tsy nandinika ny atiny natolony aho.
Ny zavatra tiako dia ny kalitaon'ny lahatsoratra tsirairay, ny fahitana mamelombelona an'ny mpamoaka lahatsoratra, ary koa ny fanajana ny mpampiasa sy ny fifandraisan'ny mpitantana sy / na ny tonian-dahatsoratra miaraka aminay mpamaky.
Misaotra anao !! 😀
Miezaka foana izahay TSY ho mpitantana fotsiny ny bilaogy na ny fiaraha-monina, fa mba ho anisan'izany koa, zarao amin'ireo mpampiasa ... andao, fianakaviana iray lehibe isika rehetra 🙂
Misaotra betsaka anao !! Ho fanokanana ny fotoanao sy hizaranao ny fahalalanao dia betsaka ny zavatra nianarako teto ary azo antoka tao anatin'ny roa taona satria Linux dia ho Rakipahalalana Rindrambaiko Maimaimpoana
hahahahaha Tsy mieritreritra ny Encyclopedia aho, fa amin'ny maha-tranonkala ahy ahazoan'ny mpampiasa aina aina rehetra, afa-po aho haha.
Misaotra anao tamin'ny hevitrao 😀
Tsy mifanaraka amin'ny fehezanteniny farany KZKG ^ Gaara aho rehefa miteny hoe: "Holazaiko fotsiny fa tsy ampy ny fifandaharana." Mamela fahatsapana faharesena amin'ny Herimpo. Satria tsy mila olona hiaro azy ny Linux, dia niaro tena izy. Ny herim-po dia tantara taloha.
HAHA, nitranga izany fa tsy niaro an'i DesdeLinux toa izany izy, fa ny fanapahan-kevitra noraisinay mba hanatsarana kokoa ny DesdeLinux, nefa toa mbola tsy azon'ilay zaza izany.
patriziosantoyo dia hoy izy:
Ny azoko lazaina fotsiny dia: MANKASITRAKA Avy Linux! Tsaroako fa nihaona tamin'ny DesdeLinux aho noho ny fitadiavana toro-hevitra ho an'ny LMDE, raha tadidiko tsara dia bilaogy Elav izay nanonona azy io. Nanomboka tamin'izay fotoana izay dia nanjary zava-dehibe ho ahy ny mianatra zava-baovao, hevitra ary hafa. Misaotra indrindra an'i KZKG ^ Gaara sy Elav aho fa ho very imbetsaka ny marina raha tsy nisy ny lahatsoratr'izy ireo. Misaotra antsika rehetra amin'ny fomba mitovy Misaotra an'izay rehetra nandray anjara tamin'ny valiny tamin'ny lahatsoratra izay ianaranao betsaka koa.
Valio i patriziosantoyo
Sakaiza mahafinaritra 🙂
Na ho an'i Elav na ho ahy (ary heveriko fa ho an'ny sisa amin'ireo tonian-dahatsoratra) dia nahafaly ahy ny teo ho an'ireo mpampiasa, afaka mizara aminareo ny fahalalanay, ny kely izay nianaranay tao anatin'izay taona lasa izay .
Ary ... raha miankina amintsika dia ho eo foana LOL! 😀
Tsy manana na inona na inona aho fa misaotra anao, jereo, efa ela aho no namaky azy ireo (tsy hitako hoe ohatrinona), fa hatramin'ny farany aho dia liana tamin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny bilaogy, ny marina dia tiako ny afaka hiara-miasa amin'ny zavatra sasany, lahatsoratra hafa, satria tena tiako ny manoratra, tsy mampaninona ahy ny fiaraha-miasa amin'ny lahatsoratra sasany, ka manome zavatra ho an'ny fiaraha-monina.
Tianay kokoa ny manome anao ny zavatra niainanao tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra, samy hafa ny tontolon'ny mpampiasa, izany no antony tianay hatrany hamaky izay lazain'ny mpamoaka lahatsoratra 🙂
Raha hisoratra anarana amin'ny tranokala ary hanoratra zavatra, eto no hahitanao ny rohy: https://blog.desdelinux.net/wp-admin/
Izay fisalasalana na fanontaniana dia andefaso mailaka aho ary hanampy anao am-pifaliana: kzkggaara [ARROBA] desdelinux [POINT] net
Novakiako ity tranonkala ity hatramin'ny talohan'ny nananany ny endrika misy azy ankehitriny. Miditra azy isan'andro aho ary nianatra zavatra maro avy amin'izany, saika mihoatra ny tamin'ny hazakazaka. Nahatonga ahy haniry hanome zavatra izany ary manatsara ny tranonkalako aho izao, amin'ny tsy fividianana sehatra tsaratsara kokoa noho ilay iray izay ananako vonona izany ary hamerina amin'ny fiarahamonina izay nomen'ny fiarahamonina ahy.
Ny olona toa anao dia mahatonga an'i Linux ho tsara. Misaotra tamin'ny fanoloran-tenanao.
Uff eny, toa hitako fa nanova ny endriny nandritra ny taona maro isika ... raha ny marina dia 1 volana lasa izay na mety 2 volana HAHAHA.
Etsy an-danin'izany, arahaba soa ao amin'ny bilaoginao ... tena manana lahatsoratra mahaliana ao ianao, indrindra ho an'ireo miasa ato amin'ny tambajotra na misy mpizara 😉
Izaho dia niresaka talohan'ny fiovana famolavolana radika, ary efa ela be izany, hoy aho.
Misaotra, manana ny sehatra misy ahy ihany aho amin'ny farany ary manomboka manomboka tsikelikely ireo zavatra.
SatriaLinux dia mandray anjara betsaka amin'ny fiarahamonina Linuxera amin'ny teny espaniola. Vitsy ny tranokala mavitrika ary miaraka amina lahatsoratra mahaliana toy izany.
Satria miantso ny MuyLinux ianao, Andao hampiasaLinux ... tsy ratsy ny manoratra lahatsoratra miaraka amin'ireo tranonkala momba ny Linux sy ny Open Source, mba hanitarana ny fahalalantsika ary hahafahana manome zavatra bebe kokoa amin'ity vondrom-piarahamonina ity. Avelako eo…
Raha ny marina dia tsy izaho no mety indrindra hiresaka momba ny tranonkala fanovozan-kevitra amin'izao fotoana izao, tsy dia mamaky tranokala maro eto amin'izao tontolo izao amin'ny teny Espaniôla aho, saika ny RSS-ko rehetra na omen'ny tag (izany hoe ireo lahatsoratra mifandraika amin'i bash, na inona na inona fiaviany) na Planeta distros fotsiny, na bilaogy amin'ny teny anglisy na zavatra toa izany.
Fantatro ny MuyLinux satria taloha be aho dia mpanaraka azy ireo, ary andao hampiasa Linux dia tranonkala iray hafa, hafa, mendrika ny fanajana rehetra eto an-tany 😀
Mahavariana fotsiny izany, saingy… Te ho «repipi» kely aho, tsy vao voalohany no namaky «anao» tao amin'ny forum, «ianao» dia nosoratana tsy nasiana mari-tsoratra (satria tsy misy ianao , ka tsy mety ho tonga amin'ny hadisoana).
HAHA marina !! 😀
Misaotra tamin'ny fanitsiana 😉
Haaaa linuxra fianakaviako lehibe, ny tena marina dia tsy fantatro izay hataoko raha tsy avy amin'ny Linux androany, dia nampanantena aho fa indray andro any dia hanao lahatsoratra ho an'ny bilaogy aho ary tamin'ity no nahatonga ahy te hanoratra amin'ny faran'ny herinandro. Azoko antoka fa hametraka zavatra aho !!! Misaotra amin'ny FromLinux efa misy !!!!!!
hahahahaha dia avy eo! Miandry an'ity paositra ity isika ... LOL!
Ny zavatra mahatsikaiky dia ho antsika sy elav, ampahany lehibe amin'ny fiananay no manodidina an'i FromLinux, manantena aho fa ny hoavintsika 😉
Misaotra anao rehetra nanatanteraka an'io.
Angamba, ny hany zavatra banga ananantsika, dia ny fampianarana bebe kokoa amin'ny gimp sy inkscape, ary koa lahatsoratra vitsivitsy hafa momba ireo mpamily fampisehoana, mari-pahaizana, kely an'io.
Tsy manam-pahaizana amin'izany aho fa angamba hanampy anao ity lahatsoratra ity:
Uff eny, tiako koa ny mamaky lahatsoratra momba an'i Gimp na Inkscape, andao hojerentsika raha mianatra bebe kokoa momba ireo aho hehe, manantena aho elav mangoraka sy manao ny sasany, satria izy no manjaka amin'ireo programa ireo.
Mikasika ireo benchmark dia te-hanao famerenana izahay fa amin'ny farany noho ny antony X na Y dia tsy nataonay izy ireo 🙁
Raha ny fijeriko izay mandray anjara amin'ny linux toy ny bilaogy maro hafa momba ny linux dia fahalalana mazava ho azy.
Ary toy ny amin'ny lamaody ihany, ny bilaogy mety aminao.
Taorian'ny fanidiana ny bilaogy linuxmexico, desdelinux no mandray ahy.
FinchoX dia hoy izy:
Eny, nisoratra anarana fotsiny aho mba hisaorana anao. Toa nanaiky aho fa hanao an'ity boky ity, efa nanaraka ny tranokala efa ela aho izao, ary mila milaza aminao aho fa manao asa tsara ho anao rehetra.
Ny fiaraha-monina nandresen'izy ireo dia tena tsara !!
Valio amin'i FinchoX
Izaho dia mpiara-miasa (tena mahazatra, haha) an'ny Let's Use Linux, ary afaka manome toky anao aho fa miaraka amin'ity bilaogy ity, ianao dia mitoetra ho fari-pitsipika na "mavesatra" raha ny toro-hevitra, ny tetika, ny vaovao ary izay rehetra miresaka. amin'ny tontolon'ny Linux. Satria izy ireo dia bilaogy 2 somary tanora, zava-bita mahavariana, ny maha-iray amin'ireo bilaogy voalohany atolotry ny manam-pahaizana maro azy momba ny Linux, heveriko fa tsy voavidim-bola!
Imbetsaka aho no naka hafetsena tamin'ity pejy ity hampiharana azy ary miaraka amina lahatsoratra maro hafa dia nanosika ahy hahafantatra momba ny lohahevitra iray manokana. Misaotra an'io 😀
Valiny tamin'i Juank
Misaotra anao tamin'ny hevitrao, tena mampahery 😀
Araka ny nolazaiko hatrany tao amin'ny lahatsoratra, manandrana izahay tsy hanao fahadisoana mitovy amin'ny an'ny hafa ary mamoaka vaovao sy vaovao fotsiny, hatreto dia afaka nanatanteraka ny fangatahana izahay 🙂
"FromLinux" dia iray amin'ny toerana tsara indrindra, amin'ny teny Espaniôla, hianarana sy hahitana ny mety an'ity rafitra fiasa mahafinaritra ity sy ny fampiharana azy.
Ireo fandraisana anjara (tena tsara) dia azo takarina na dia ho an'ireo mpampiasa vaovao aza, ny vakiteny dia mampiala voly ary tsy misy filaminana azo antoka (tsy toy ny amin'ny toerana hafa).
Miarahaba sy arahaba indrindra.
Valiny tamin'i JC
Fernando Monroy dia hoy izy:
Bilaogim-piarahamonina tsara. Mamporisika anao aho hanohy, fahombiazana.
Valiny tamin'i Fernando Monroy
Mizarà ny fahalalanao Linux
Mamonjy 450 miliara euro i Eropa noho ny rindrambaiko maimaimpoana